Umaski wokuphela kweenwele. Ukupheka iiskiti zeengcebiso zentliziyo ezomileyo ekhaya.
Mask for tips on dry hair: iincwadi zokupheka eziqhelekileyo
Izinwele eziphilileyo kunye nezilungele kakuhle kukuhle kwendalo yonke intokazi. Ngenxa yokunyamekela kunye nokusetyenziswa kweziqhumiso ezinobundlobongela (iifestile, i-gel, i-foam), iinwele zikwazi ukulahlekelwa ubunqunu kunye nobunzima bayo. Kwaye kunye nokunyamekela kwabo ngokufanelekileyo kunye nako rhoqo kuya kubuyisa impilo yabo kunye nokukhanya kwendalo.
Ukuqwalasela iingcebiso ezilula kodwa eziyimpumelelo zeengcali zethu zobuhle, unokukhawuleza ubuyisele izinwele zakho zendalo kunye nokucima iingcebiso ezinomileyo nezomileyo.
Indlela yokubuyisela iinwele ezinomileyo - iingcebiso zeengcali zezobuchwephesha
Iinqununu zesebe, ukunyuka okukhulu, ukunyaniseka yimiba ephambili yabasetyhini banamhlanje kunye naluphi na uhlobo lweenwele. Ukuqwalasela le nyaniso, ukubuyiswa kweenwele kuyimfuneko ukukhetha iindlela ezikhethekileyo ze-uhodovye - iimaski, i-rinses, i-balsams, ngokufanelekileyo ngokwalo ngqo uhlobo lwenwele.
Ukongezelela, i-trichologists bayacetyiswa ukuba bahambisane nemigaqo elandelayo yokunyamekelwa kweenwele ezimeleyo kunye neziphelo ezihlukeneyo:
Ukudibanisa iinwele ngqo phambi kokuhlamba, ukuphepha ukugxinwa kwabo kwinkqubo
Sebenzisa ukuhlamba i-shampoos kunye nezithako zemvelo, ezihambelana nohlobo lweenwele
Emva kokuhlamba, musa ukusula iinwele zome, kodwa zenze zome
ngokuncinci ukusetyenziswa kweresidi, ukuchithwa, i-ployka
sebenzisa i-scallops yeenkuni kunye nama-combs
zibandakanya kwimveliso yokutya ecebile kwiivithamini A, B, E, C
tyelela i-hairdresser rhoqo
Iingcali zicebisa ukuba zithathe indawo yezithambiso zeevenkile zeenwele kwizilwanyana eziqhelekileyo. Ngokomzekelo, i-balm ingathatyathwa yindawo yokubeka i-decoction. Isalathisi seenwele zekhaya, esenziwe ngezandla zakho, siya kunceda kuphela ukubuyisela iinwele ezomileyo, kodwa ukukhusela ukukhubeka kwazo.
Ukupheka kwamaski asebenzayo kwiingcebiso ezomileyo ekhaya
Khetha i-mask yesigxina kwiingcebiso ezomileyo kufuneka, kwindawo yokuqala, ugxininise uhlobo lweenwele.
Umaski weenwele kunye neengcambu ze-fat and tips tips
Ukuba unezimpande ezinobuncwane kwaye, ngexesha elifanayo, iingcebiso ezomileyo zeenwele, ngoko uya kulungelelanisa imastadi yesardard. Iqukethe: isardadi, i-yolk, ioli (umnqumo okanye enye). Imilinganiselo yemveliso ikhethwe ngabanye, ingqalelo ubude kunye nenani leenwele kwisilinganiselo se-2: 1: 1. I-mask isetyenziselwa imizuzu engama-15-25, emva koko ihlanjwe.
Iifisi ze-oyile zeeNwele eziHlangayo
I-mask ye-oyile yeenwele - indlela ebalulekileyo yokunyamekela iinwele ezomileyo. Ngaloo ndlela, izicwangciso ezinobungcono zibuyiselwe ngokugqithiswa ngenye yeoli elandelayo:
Nceda uqaphele ukuba xa usebenzisa le mveliso, iingcambu akufanele zifakwe, kuba i-oli inzima ukuhlamba. Kunconywa ukugoba intloko ngefilimu okanye ithawula. Ukuhlamba ioli kuyimfuneko ngoncedo lwe-shampoo encinci kunye ne-conditioner uhlanza emva kwemizuzu engama-60-90 emva kwesicelo.
Iimpawu zokuthungela amakhaya ezinwele eziqhelekileyo
I-vitamin mask ukusuka kwiidroti yindlela ekhawulezayo, engabizi kwaye ephumelelayo yokuphelisa ubumnandi kwibala eliqhelekileyo lonwele. I-mask i-carrot malunga namacebiso angomileyo aqukethe iivithamini A, E, C, B, K, ezenza indima echaphazelekayo kwindlela yokutya kunye nokubuyiselwa kweenwele. Ukubunjwa kwe-mask kufaka ioli yelanga, i-carrot juice (1: 1). Faka isicelo se-mask ngqo kwiingcebiso zeenwele, kwaye uhlambe emva kwemizuzu eyi-15.
Esinye isisombululo esisebenzayo sokuphelisa iingcebiso ezomileyo kunye nokuvuselela iinwele zeentloko ziyi-mayonnaise mask. Ukuze uzilungiselele udinga 1 tbsp. isipuni se-mayonnaise, i-yolk, i-garlic, i-1 teaspoon yobusi. Faka isicelo kulo mveliso ngaphezu kobude beengqongqelo. Emva kwemizuzu engama-20, imaski kufuneka ihlanjwe.
I-mask yasekhaya enomdla kuzo zonke iintlobo zeenwele
Isiseko sokondla iinwele zaluphi na uhlobo lungaba yimaski yasekhaya ngokumalunga neengcebiso ezomileyo, eziqukethe ioli ye-castor ne-yolk. Ukulungiselela kwayo, kuyimfuneko ukuxuba iimbumba ezimbini nge-2 tbsp. iipuni zeoli, uze usebenzise imaski kwiingcebiso (imizuzu engama-15-20), ubambe ngobumnene i-curl nganye kwi-foil. Emva koko supha ngamanzi.
Siyathemba ukuba iincwadi zokupheka ezithengiweyo kunye neenwele zezindlu zincinci ziza kukunceda ukulibala malunga neengcebiso zentliziyo ezomileyo kunye ezinokukhubazeka kanye kanye!
Izindlela kunye neendlela zokulungisa iinwele
Kuthekani ukuba loo mntu uthobekile?
Umfanekiso wefashoni kaFilip Kirkorov wahlekwa ngamalandeli ase-Albina Dzhanabaeva
I-stylish, imfashini, imnandi
Umsebenzi wexeshana: oko kufuneka ukwazi
I-cutlets e-juicy esuka kwi-squid
Umququ ngeentaka zeenkukhu, i-gnocchi kunye ne-pesto sauce
Umzobo uphawulwa kuMhla kaMama ngeepende kunye neepensile zabaqalayo kwi-nursergart kunye nesikolo. Indlela yokudweba umzobo woSuku loMama kwiifoto-zinyathelo-nge-nyathelo kunye namavidiyo
I-Abdominoplasty (iplastiki yesisu)
Ukuthintela imilenze ye-varicose, izilwanyana zamalungu
Indlela yokunceda ama-pancreas
AmaSanwitshi kunye netamatati, i-sauce kunye noshizi